साहित्यिक ट्याग: तपाइँ कुन किताब दिनुहुन्छ ...? | वर्तमान साहित्य
साहित्यिक ट्याग: तपाई कुन किताब दिनुहुन्छ…?
यदि तपाईं सामान्यतया 'को YouTube च्यानलहरू प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भनेBooktubers ' वा यदि तपाईं साहित्यिक ब्लगहरूको नियमित पाठक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रमाणीकरण गर्नुभयो कि तथाकथित 'साहित्यिक ट्यागहरू'। यी ट्यागहरूको साथ, उद्देश्य पुस्तकहरूलाई सिफारिश गर्नु हो र / वा तिनीहरूलाई एक वा बढी सुविधाहरूसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूलाई धन्यबाद, तपाईले थोरै व्यक्तिलाई तपाईले भिडियोमा हेर्नुहुने वा ब्लगमा पढ्ने व्यक्ति पनि चिन्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा, मँ यो महिनाको एउटा वा केही प्रकारको ट्यागहरू बनाउन सुरू गर्न चाहान्छु र यसैले तपाईसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम हुन सक्छु कि तपाइँको प्रतिक्रियाहरू पनि देख्न सक्दछौं जुन तपाईं टिप्पणी अनुभागमा छोड्न सक्नुहुनेछ, यो प्रविष्टि तल। यदि यो तपाईंसँग ठिक छ भने, यो एकसँग सुरु गरौं जुन मैले आज तपाईंलाई प्रस्तुत गरेको छु। तपाईं कुन किताब दिनुहुन्छ ...? अब तपाईले व्यक्तिहरूको शृंखला देख्नुहुनेछ जसलाई म एक विशिष्ट लेखक, एक साहित्यिक गाथा वा निजीकृत पुस्तकको किताब सिफारिस गर्दछु। हामीले सुरु गर्यौं!
1 म मेरी आमालाई कुन किताब दिन्छु?
2 म मेरो बुबालाई कुन किताब दिन्छु?
3 म मेरो साथीलाई कुन किताब दिन्छु?
3.1 ईतिहासको बारेमा केहि
3.2 अर्थशास्त्र र उद्यमशीलता को बारे मा केहि
3.3 सुधार र प्रेरणाको बारेमा केहि
3.4 म द्वारा केहि लेखिएको
4 म आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन पुस्तक दिनेछु?
5 तपाई मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी कुन किताब दिनुहुन्छ?
6 म आफूलाई कुन पुस्तक उपहार दिनेछु?
म मेरी आमालाई कुन किताब दिन्छु?
मेरो आमाको लागि म एउटा पुस्तक चाहान्छु जसले उनलाई उत्प्रेरित गर्छ, जसले उसलाई सबै कुरा बिर्सन्छ र सबैलाई बिर्सन्छ र उनको ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ, जसले उसलाई जिउँदो महसुस गराउँदछ र त्यसले दैनिक जीवनमा त्यो लामो समयदेखि पर्खिरहेको शारीरिक र भावनात्मक हित प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। । यो सबै को लागी हो कि म उसलाई दिने किताब हुनेछ "साना क्रान्तिहरूको पुस्तक" de एल्सा पनसेट.
कामको तनाव, घरको भावनात्मक वातावरण, निराशावादी आवाज जुन सँधै आउँछ जब हामीलाई कम से कम यसको आवश्यकता हुन्छ, ती विषाक्त वातावरण जसले हामीलाई राम्रो महसुस गर्दैन, अज्ञात वा क्रोधको सामना गर्ने डरले हामीलाई आक्रमण गर्दछ। केहि समस्याहरू समाधान भएपछि हामीलाई विकिरण गर्दछ जब आज हाम्रो दिनको परिस्थितिहरू रहन्छन् जसलाई हामी कसरी सामना गर्ने भनेर जान्दैनौं।
हामी भोकाएको, तिर्खाएको वा निद्रा लाग्दा के गर्ने भनेर हामीलाई थाहा भइसकेको छ: खाने, पिउने वा सुत्ने। तर हामी मध्ये धेरै जसो हामी दु: खी, निराश वा निराश भएको बेलामा के गर्ने भनेर जान्दैनौं।
यो पुस्तक हामीलाई प्रदान गर्दछ सबैको लागि उपलब्ध दैनिक दैनिक कार्यहरूको साथ हाम्रो भावनात्मक कल्याण सुधार गर्ने कुञ्जीहरू।
म मेरो बुबालाई कुन किताब दिन्छु?
म मेरो बुबालाई जस्तै मेरो बुबाको रूपमा दिन चाहन्छु, जसले उसलाई दिनदिनै राम्रो महसुस गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ... छोराले आफ्ना बाबुआमाको खुशी र कल्याणको लागि बढी के चाहान्छन्? केहि छैन!
यसैले म पुस्तक छनौट गर्दछु "अलास्कामा खुशी हुनु: बाक्लो र पातलो मार्फत बलियो दिमाग" de राफेल सन्तन्द्रेउ.
यस पुस्तकले वैज्ञानिक तवरले प्रमाणित विधि प्रस्तुत गर्दछ जसले हामीलाई स्वस्थ र भावनात्मक रूपमा बलियो, शान्त, वर्तमानमा केन्द्रित हुन र हाम्रा सबै डरहरूबाट मुक्त हुन अनुमति दिन्छ।
यसको लेखकका शब्दहरूमा, राफेल सन्तन्द्रेउ: «प्रिय पाठक: म तपाईको लामो समय सम्म पर्खिरहेको छु। तपाईं अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन; यदि तपाईं सहि दिशामा हिंड्न थाल्नुभयो भने, तपाईं चाँडै नै पथ फेला पार्नुहुनेछ। तपाईं यस मार्फत जानुहुँदा, राम्रो जीवन चेरी फूल जस्तै खुल्नेछ। हजारौं व्यक्तिहरूले पहिले यो समान संज्ञानात्मक विधिको साथ भावनात्मक शक्ति भेट्टाए। यो तपाईंको पहुँचमा पनि छ ».
म मेरो साथीलाई कुन किताब दिन्छु?
मेरो पार्टनरसँग मसँग यो केहि सजिलो छ, किनकि उहाँ बिभिन्न विषयवस्तुहरू छुने को लागी सम्पन्न हुनुहुन्छ:
ईतिहासको बारेमा केहि
केहि पुस्तक जसले एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना वर्णन गर्दछ, वा एक सभ्यताको बारेमा जुन उसले रोमन वा वाइकि as जस्ता मनपरायो ...
वा यसको विपरितमा, यस पुस्तक युवल नोआ हरारी, Animals जनावरदेखि भगवानसम्म », इतिहास र ज्ञान को लागि एक जोश संग एक मानिस को लागी सही पठन। यसले १००,००० वर्ष पहिलेदेखि हाम्रो प्रजातिको जीवनलाई सम्बोधन गर्दछ। हामी कसरी अस्तित्वको लागि स in्घर्षमा आफूलाई थोप्न को व्यवस्था गर्ने? किन हाम्रा चोर पुर्खा शहरहरू र राज्यहरू निर्माण गर्न भेला भए? हामी देवताहरू, राष्ट्रहरू वा मानव अधिकारहरूमा कसरी विश्वास राख्छौं; पैसा, पुस्तक वा कानून विश्वास गर्न? यो एक महान पुस्तक हो जुन तपाइँ निश्चित रूपमा रमाउनुहुनेछ।
अर्थशास्त्र र उद्यमशीलता को बारे मा केहि
उनका अध्ययनहरू यस विषयसँग सम्बन्धित छन्, त्यसैले हाम्रो ज्ञानलाई गहिरो पार्नु र यसलाई विस्तार गर्नु सधैं राम्रो हुन्छ।
सुधार र प्रेरणाको बारेमा केहि
कसरी पुस्तक हुन सक्छ Best सर्वश्रेष्ठ योद्धाहरू जस्तै सोच्नुहोस् » de मार्क देवी। वर्णन गरिएको रूपमा: यो पुस्तक एक महत्वाकांक्षी मानिसका लागि उपयुक्त छ जसले चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू सेट गर्दछ र तिनीहरूलाई पूरा गर्न सबै गर्छ। पूर्व सील कमाण्डर मार्क डिभाइन द्वारा लिखित, यसले मानसिक फोकस र नियन्त्रण प्रविधिको पर्दाफाश गर्दछ जसले दिमागलाई आन्तरिक शक्ति, भावनात्मक लचिलोपन, र व्यावहारिक अन्तर्ज्ञानको लागि आकार दिन्छ। यो मूलतः कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा कुलीन नेता हुन खोज्नेहरूको लागि मार्गनिर्देशन हो।
म द्वारा केहि लेखिएको
उहाँ मेरो लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर सचेत गराउन, यसको अर्थ मेरो जीवनमा उहाँ जस्तो व्यक्ति हुनुको अर्थ के हो, आदि ... मीठो र घनिष्ठ स्पर्श सहित एक पूर्ण प्रेम कहानी, वाह!
म आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन पुस्तक दिनेछु?
ठिक छ, चाहे त्यो केटा हो वा केटी, म उसलाई एउटा किताब दिनेछु जहाँ उसले मान्छेहरूको भलाइ र उनीहरूको कार्यको बारेमा कुरा गर्छ, कहानी वा दफनको रूपमा।
म तिनीहरूलाई पनि दिनेछु "सानो राजकुमार" de एन्टोइन डे सेन्ट-एक्सप्युरीकिनकि किनभने मलाई थाहा छ कि यो बच्चाहरूको लागि भन्दा वयस्कहरूको लागि बढी पुस्तक हो, म उनीहरूको भविष्यमा पढ्ने निश्चित थिएँ र यसैले ती अविश्वसनीय शिक्षाहरू प्रदान गर्दछ जुन यसले यसको पृष्ठहरूमा राख्दछ।
तपाई मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी कुन किताब दिनुहुन्छ?
मसँग यो स्पष्ट छ! एक पुस्तक जसले तपाईंलाई खान्की नभएसम्म हाँस्ने बनाउँदछ, यसले तपाईंलाई सपना बनाउँदछ, जसले तपाईंलाई फेरि प्रेममा विश्वास गराउँदछ यदि तपाईंले भर्खरको ब्रेकअपको सामना गर्नु परेको छ भने, यसले तपाईंलाई केही बेर बिर्सनुभयो।
र यसको लागी मलाई लाग्छ मैले छनौट गर्नेछु भलेरिया सागा de इलिसाबेट benavent। एक गाथा पुस्तकहरु को बनेको «भेलेरियाको जुत्ता», The आईनामा भलेरिया », Black कालो र सेतोमा भलेरिया » y «Valeria अल नग्न» उनीहरू खुशी हुन संघर्ष गर्ने चार केटीको जीवनको वर्णन गर्छन्। Nerea, Carmen, लोला र Valeria पीडित, रुन, हाँस्न, प्रेम मा गिर र, अन्ततः, बाँच्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्। म्याड्रिडले तपाईका कारनामहरू र विश्वमा तपाईको लागि ठाउँ बनाउनको लागि गरेको प्रयासहरूको गवाही दिनेछ।
म आफूलाई कुन पुस्तक उपहार दिनेछु?
ठीक छ, मेरो लागि अहिले, यो सटीक क्षणमा, म आफैंलाई दुईवटा किताब दिनेछु।
"पढ्ने महिलाहरू खतरनाक हुन्छन्" de स्टीफन bollmann.
Y, "उच्च संवेदनशीलता, मुटु बाट जीवित" de करीना जेजर्स.
र तपाईं, कुन पुस्तकहरू तपाईं यी प्रत्येक6प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ:
तपाईको आमालाई कुन किताब दिनुहोस्?
तपाईले आफ्नो बुबालाई कुन किताब दिनुहुन्छ?
तपाईको साथीलाई कुन किताब दिनुहोस्?
तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन पुस्तक दिनुहुन्छ?
तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई कुन किताब दिनुहुन्छ?
र अन्तमा तपाई आफैंलाई कुन किताब दिनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साहित्यिक ट्याग: तपाई कुन किताब दिनुहुन्छ…?
तपाईको आमालाई कुन किताब दिनुहोस्? अभिनेता फ्रान्सिस्को रबालको जीवनी
तपाईले आफ्नो बुबालाई कुन किताब दिनुहुन्छ? उत्तरहरूको खोजीमा ... फेलिप गोन्जालेज
तपाईको साथीलाई कुन किताब दिनुहोस्? अन्तिम यहूदी ... नोह गॉर्डन
तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन पुस्तक दिनुहुन्छ? सानो राजकुमार ”एन्टोइन डी सेन्ट-एक्सप्युरी र स्पेन अफ द स्पेनको इतिहास।
तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई कुन किताब दिनुहुन्छ? जैमे गिल डी बिडमा। कुराकानी
र अन्तमा तपाई आफैंलाई कुन किताब दिनुहुन्छ? शरिया BAUDOUIN डपरेट
रिचर्ड फोर्डले साहित्यको लागि राजकुमारी अफ अस्टुरियस पुरस्कार जीते